အလုပ်မြန်မြန်ပြီးအောင် ဒီလိုလေးတွေလုပ်ကြည့်ပါ။ - For her Myanmar
တစ်နေကုန် အသေအလဲလုပ်နေတာတောင် အလုပ်တွေ မပြီးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့သူတွေ ဖတ်သင့်သောနော်..
ယောင်းတို့ရေ အလုပ်မှာ တစ်နေ့လုံး အလုပ်တကုပ်ကုပ်လုပ်နေပေမဲ့ အလုပ်မပြီးတာမျိုးဖြစ်ဖူးလား? အဲ့လိုမျိုးတွေ ထပ်မဖြစ်ရအောင်နဲ့ ယောင်းတို့ အလုပ်များများပြီးအောင် ဘယ်လိုတွေခန့်ခွဲသင့်လဲဆိုတာ ပြောပေးသွားမယ်နော်။
တစ်နေ့ အိပ်ချိန် ၇-၈ နာရီကြား ရှိသင့်ပါတယ်တဲ့နော်။ ဒါပေမယ့် တော်တော်များများက အိပ်ချိန်လျှော့လိုက်ရင် အလုပ်ပိုပြီးမယ်လို့ထင်နေတတ်ကြတာရယ်။ မှားပါတယ်တဲ့။ ယောင်းတို့အိပ်ရေးမဝရင် အလုပ်မှာ ဘယ်အာရုံစိုက်နိုင်ပါ့မလဲနော်။
(၂) မနက်စာ ဝဝစားပါ။
မနက်စာ ဝဝစားထားတဲ့သူတွေဟာ မနက်စာမစားတဲ့သူတွေထက် အာရုံပိုစိုက်နိုင်ကြပါတယ်တဲ့။ ကိုယ်တွေဆို မနက်စာမစားရင် ဘာမှကို မလုပ်နိုင်တာ။ ဟိ အစားတစ်လိုင်း ယောင်းတို့ကတော့ ပြောဖို့လိုမယ်မထင်ဘူးနော်
Related Article >>> အုံ့မှိုင်းမှိုင်းဖြစ်နေတဲ့ ရာသီဥတုကြီးမှာ အလုပ်လုပ်ချင်စိတ်တွေကို ဘယ်လိုဖော်ရမလဲ ?
(၃) တစ်နေ့တာလုပ်ရမှာတွေကို ချရေးပါ။
ရုံးရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ ဘာအလုပ်မှ စမလုပ်ပါနဲ့ဦး။ Sticky note လေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် မှတ်စုစာအုပ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်နေ့တာလုပ်ရမယ့်အစီအစဉ်တွေကို ချရေးပစ်ပါ။ အရင်ဆုံး ဦးစားပေးလုပ်ရမယ့်ဟာကို ထိပ်ဆုံးကနေ အစဉ်လိုက်ရေးသွားပါ။ (လုပ်လို့ပြီးသွားရင်လည်း တစ်ခုပြီးတာနဲ့ တစ်ခု ခြစ်ခဲ့ပါ။ ဒါဆို တစ်နေ့တာလုံး ဘာတွေပြီးလဲ ပြန်ကြည့်လို့ရတာပေါ့။)
(၄) နိုတီတွေကို လျစ်လျူရှုလိုက်ပါ။
တစ်ခါတစ်လေ အလုပ်လုပ်နေတုန်း ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဖုန်းတွေဝင်လာတတ်ပါတယ်။ အင်မတန် အရေးကြီးတဲ့ ဖုန်းမျိူးမှ ကိုင်ပါ။ ပြီးတော့ အီးမေးလ် အသစ်ရောက်လာလည်း ဖွင့်မကြည့်ပါနဲ့။ လုပ်လက်စအလုပ်ကို အရင်ပြီးအောင်လုပ်ပါ။ မဟုတ်ရင် အလုပ်တွေ တန်းစီသွားပါလိမ့်မယ်။
အရေးကြီးတာက ဖေ့ဘွတ်ခ်နဲ့ တခြား လူမှုကွန်ယက်တွေကို မကြည့်မိအောင်ကြိုးစားပါ။ (ဖေ့ဘွတ်ခ်နဲ့ အလုပ်လုပ်နေရသူတွေကတော့ ခြွင်းချက်ပေါ့နော်)
Related Article >>> အလုပ်ထုတ်ခံရဖို့ သေချာစေတဲ့ အချက် (၅) ချက်
(၅) မလိုတာတွေ ပိတ်ထားပါ။
ခုခေတ်က အင်တာနက်ခေတ် အိုင်တီခေတ်ဆိုတော့ ကွန်ပျူတာနဲ့အလုပ်လုပ်ရတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေများပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကွန်ပျူတာနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ လုပ်နေတဲ့ အလုပ်နဲ့ပက်သက်တဲ့ ဝင်းဒိုးပဲဖွင့်ထားပါ။ ကျန်တဲ့မသက်ဆိုင်တာအားလုံးကို ပိတ်ထားပါ။ မဟုတ်ရင် စိတ်ကိုစုစည်းလို့မရဘဲ ဟိုလုပ်လိုက် ဒီလုပ်လိုက်နဲ့ အချိန်ကုန်သွားပါလိမ့်မယ်။
ရုံးမှာကျ “ကျွန်မ အလုပ်လုပ်နေလို့ လာမနှောင့်ယှက်နဲ့” လို့ပြောမကောင်းဘူးလေ။ အဲ့တော့ အယဉ်ကျေးဆုံးနည်းက နားကြပ်တပ်ပြီး သီချင်းနားထောင်နေလိုက်ပါ။ ဒါဟာ “ကျွန်မ အလုပ်များနေတယ် အရေးကြီးတာတစ်ခုလုပ်နေလို့ မနှောင့်ယှက်ပါနဲ့” လို့အသံတိတ်ပြောတာနဲ့တူတူပါပဲ။ အဲ့တာတောင်မှ ခဏခဏလာလာနှောင့်ယှက်နေရင်တော့ အဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက် နားလည်အောင် တဲ့တိုးသာ ပြောပြလိုက်ပါ။ တချို့ကျ ပြောမှသိတာကိုး။
အလုပ်ကို စောစောသွားမယ် ထမင်းစားချိန်မှာ မနားဘဲ ထမင်းစားရင်းလုပ်မယ် အလုပ်ကနေ နောက်ကျမျ ပြန်မယ် ဒါတွေလုပ်ရုံနဲ့ အလုပ်ပိုပြီးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ နားချိန်မရှိဘဲဆက်တိုက်လုပ်နေတာဟာ ယောင်းတို့ရဲ့ အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းကို ကျစေပါတယ်။ဒါကြောင့် အလုပ်တစ်ခုပြီးတိုင်း ခဏတဖြုတ်နားပေးပါ။
ကဲ အလုပ်မပြီးလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အပြစ်တင်တတ်တဲ့ယောင်းတို့ရေ။ အခုလိုလေး စနစ်တကျလိုက်လုပ်ကြည့်ပါ။ ယောင်းတို့ရဲ့အလုပ်တွေ အချိန်မီပြီးသွားပါလိမ့်မယ်။
တဈနကေုနျ အသအေလဲလုပျနတောတောငျ အလုပျတှေ မပွီးနိုငျဘူးဆိုတဲ့သူတှေ ဖတျသငျ့သောနျော..
ယောငျးတို့ရေ အလုပျမှာ တဈနလေုံ့း အလုပျတကုပျကုပျလုပျနပေမေဲ့ အလုပျမပွီးတာမြိုးဖွဈဖူးလား? အဲ့လိုမြိုးတှေ ထပျမဖွဈရအောငျနဲ့ ယောငျးတို့ အလုပျမြားမြားပွီးအောငျ ဘယျလိုတှခေနျ့ခှဲသငျ့လဲဆိုတာ ပွောပေးသှားမယျနျော။
တဈနေ့ အိပျခြိနျ ၇-၈ နာရီကွား ရှိသငျ့ပါတယျတဲ့နျော။ ဒါပမေယျ့ တျောတျောမြားမြားက အိပျခြိနျလြှော့လိုကျရငျ အလုပျပိုပွီးမယျလို့ထငျနတေတျကွတာရယျ။ မှားပါတယျတဲ့။ ယောငျးတို့အိပျရေးမဝရငျ အလုပျမှာ ဘယျအာရုံစိုကျနိုငျပါ့မလဲနျော။
(၂) မနကျစာ ဝဝစားပါ။
မနကျစာ ဝဝစားထားတဲ့သူတှဟော မနကျစာမစားတဲ့သူတှထေကျ အာရုံပိုစိုကျနိုငျကွပါတယျတဲ့။ ကိုယျတှဆေို မနကျစာမစားရငျ ဘာမှကို မလုပျနိုငျတာ။ ဟိ အစားတဈလိုငျး ယောငျးတို့ကတော့ ပွောဖို့လိုမယျမထငျဘူးနျော
Related Article >>> အုံ့မှိုငျးမှိုငျးဖွဈနတေဲ့ ရာသီဥတုကွီးမှာ အလုပျလုပျခငျြစိတျတှကေို ဘယျလိုဖျောရမလဲ ?
(၃) တဈနတေ့ာလုပျရမှာတှကေို ခရြေးပါ။
ရုံးရောကျပွီဆိုတာနဲ့ ဘာအလုပျမှ စမလုပျပါနဲ့ဦး။ Sticky note လေးနဲ့ပဲဖွဈဖွဈ မှတျစုစာအုပျနဲ့ပဲဖွဈဖွဈ တဈနတေ့ာလုပျရမယျ့အစီအစဉျတှကေို ခရြေးပဈပါ။ အရငျဆုံး ဦးစားပေးလုပျရမယျ့ဟာကို ထိပျဆုံးကနေ အစဉျလိုကျရေးသှားပါ။ (လုပျလို့ပွီးသှားရငျလညျး တဈခုပွီးတာနဲ့ တဈခု ခွဈခဲ့ပါ။ ဒါဆို တဈနတေ့ာလုံး ဘာတှပွေီးလဲ ပွနျကွညျ့လို့ရတာပေါ့။)
(၄) နိုတီတှကေို လဈြလြူရှုလိုကျပါ။
တဈခါတဈလေ အလုပျလုပျနတေုနျး ကိုယျရေးကိုယျတာဖုနျးတှဝေငျလာတတျပါတယျ။ အငျမတနျ အရေးကွီးတဲ့ ဖုနျးမြိူးမှ ကိုငျပါ။ ပွီးတော့ အီးမေးလျ အသဈရောကျလာလညျး ဖှငျ့မကွညျ့ပါနဲ့။ လုပျလကျစအလုပျကို အရငျပွီးအောငျလုပျပါ။ မဟုတျရငျ အလုပျတှေ တနျးစီသှားပါလိမျ့မယျ။
အရေးကွီးတာက ဖဘှေ့တျချနဲ့ တခွား လူမှုကှနျယကျတှကေို မကွညျ့မိအောငျကွိုးစားပါ။ (ဖဘှေ့တျချနဲ့ အလုပျလုပျနရေသူတှကေတော့ ခွှငျးခကျြပေါ့နျော)
Related Article >>> အလုပျထုတျခံရဖို့ သခြောစတေဲ့ အခကျြ (၅) ခကျြ
(၅) မလိုတာတှေ ပိတျထားပါ။
ခုခတျေက အငျတာနကျခတျေ အိုငျတီခတျေဆိုတော့ ကှနျပြူတာနဲ့အလုပျလုပျရတဲ့ ကုမ်ပဏီတှမြေားပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကှနျပြူတာနဲ့အလုပျလုပျတဲ့အခါ လုပျနတေဲ့ အလုပျနဲ့ပကျသကျတဲ့ ဝငျးဒိုးပဲဖှငျ့ထားပါ။ ကနျြတဲ့မသကျဆိုငျတာအားလုံးကို ပိတျထားပါ။ မဟုတျရငျ စိတျကိုစုစညျးလို့မရဘဲ ဟိုလုပျလိုကျ ဒီလုပျလိုကျနဲ့ အခြိနျကုနျသှားပါလိမျ့မယျ။
ရုံးမှာကြ “ကြှနျမ အလုပျလုပျနလေို့ လာမနှောငျ့ယှကျနဲ့” လို့ပွောမကောငျးဘူးလေ။ အဲ့တော့ အယဉျကြေးဆုံးနညျးက နားကွပျတပျပွီး သီခငျြးနားထောငျနလေိုကျပါ။ ဒါဟာ “ကြှနျမ အလုပျမြားနတေယျ အရေးကွီးတာတဈခုလုပျနလေို့ မနှောငျ့ယှကျပါနဲ့” လို့အသံတိတျပွောတာနဲ့တူတူပါပဲ။ အဲ့တာတောငျမှ ခဏခဏလာလာနှောငျ့ယှကျနရေငျတော့ အဲ့လုပျဖျောကိုငျဘကျ နားလညျအောငျ တဲ့တိုးသာ ပွောပွလိုကျပါ။ တခြို့ကြ ပွောမှသိတာကိုး။
အလုပျကို စောစောသှားမယျ ထမငျးစားခြိနျမှာ မနားဘဲ ထမငျးစားရငျးလုပျမယျ အလုပျကနေ နောကျကမြ ပွနျမယျ ဒါတှလေုပျရုံနဲ့ အလုပျပိုပွီးမှာမဟုတျပါဘူး။ နားခြိနျမရှိဘဲဆကျတိုကျလုပျနတောဟာ ယောငျးတို့ရဲ့ အလုပျလုပျနိုငျစှမျးကို ကစြပေါတယျ။ဒါကွောငျ့ အလုပျတဈခုပွီးတိုငျး ခဏတဖွုတျနားပေးပါ။
ကဲ အလုပျမပွီးလို့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ အပွဈတငျတတျတဲ့ယောငျးတို့ရေ။ အခုလိုလေး စနဈတကလြိုကျလုပျကွညျ့ပါ။ ယောငျးတို့ရဲ့အလုပျတှေ အခြိနျမီပွီးသှားပါလိမျ့မယျ။
Tags: Career, Done, fast, finish, Job, quick, things, ways, work
မိန်းကလေးများ၏ အသည်းကွဲပုံ ကွဲနည်း(၈)မျိုး
Christina Rosy July 26, 2017
အလုပ်ထုတ်ခံရဖို့ သေချာစေတဲ့ အချက် (၅) ချက်
Ei Mon June 3, 2019